Iindaba - Gallic acid Manufacturer
Sivuyisana neSanjiang bio-tech ngokuhlaziya isiqinisekiso se-ISO 9001
I-Leshan Sanjiang isebenzisa izixhobo ezikhethekileyo zamahlathi e-China ukwenza umsebenzi onzulu kunye nokuthunyelwa kwamanye amazwe ukufumana utshintshiselwano lwangaphandle, ibe lishishini elikhokelayo elityebisa abantu kwaye lityebise amaphandle ukuze lakhe ilizwe elitsha lobusoshiyali, livuselele uqoqosho lwasekhaya kwaye luxhamle abantu.inkampani yethu inamandla ophuhliso lwenzululwazi kunye neteknoloji kwaye iminyaka emininzi yamava inyongo kunye Tara olunzulu-processing iimveliso zophando kunye nophuhliso lwabasebenzi zenzululwazi kunye nobugcisa, kunye nophando lwasekhaya elaziwayo zonyango kunye nemveliso biochemical kunye nophuhliso lwabasebenzi zenzululwazi kunye nobugcisa, bathathe inani leeprojekthi zophando ezinkulu zesizwe kunye nenqanaba lomphathiswa, bafumane inani leempumelelo zezenzululwazi nezobuchwepheshe kunye namalungelo awodwa omenzi wechiza, kwaye basebenzisane neChina Forestry The Academy of Sciences, Nanjing Forestry University, Northeast Forestry University kunye nezinye iikholeji kunye neeyunivesithi ziyasebenzisana ukuphuhlisa ngokuqhubekayo. iimveliso zehlathi iiprojekthi processing olunzulu, kunye neemveliso ngokuthe ngcembe ukungena kwimarike yamazwe ngamazwe.
I-Leshan Sanjiang Biological Technology Co., Ltd. ityale izigidi ezingama-30 zeeyuan kwisigaba sokuqala, kwaye yakha imigca emihlanu yemveliso yokucoca inyongo kunye netara, kunye nemveliso yonyaka yeetoni ezingama-600 zegallic acid, iitoni ezingama-300 zepropyl gallate, iitoni ezingama-200 ze methyl gallate, kunye 200 iitoni tannic imveliso series acid.
Ngokusekwe kwiingenelo zomgaqo-nkqubo, iingenelo zezibonelelo, kunye neenzuzo zeetalente, inkampani ibambelela kwingqikelelo "yokulandela ukugqwesa kunye nokusebenza okuzinzileyo", isigaba sesibini seprojekthi siya kutshintsha ukusuka kuthotho lwe-gallic acid yabaphakathi bamayeza, izongezo zokutya, kunye neemveliso zeekhemikhali ezilungileyo. kwi-biopharmaceuticals kunye ne-electronic chemistry.iimveliso ezintsha uzama ukwaphula monopoli angaphandle, kwaye igalelo kuphuhliso lwasekhaya eliphezulu-ngokuchanekileyo ishishini electronic
KwiTekhnoloji kunye nokuphuculwa kwemveliso,I-Leshan sanjiang bio-tech ihlaziye umgangatho omtsha wolawulo lwesatifikethi sobunyani benkqubo nge-2 kaJuni, ngo-2021.
inkqubo yolawulo lomgangatho ihambelana ne:
Inkqubo yolawulo lomgangatho wombutho iyasebenza : Imveliso yeemveliso ezenziwe nzulu zeGallnut tannin
Ixesha lokuposa: Jul-26-2021